Macaluul soo wajahday woqooyiga Nigeria - BBC Somali
Image caption Carruurta ayaa inta badan wajahaysa gaajo ba'an.
Qaramda Midoobey ayaa ka digaysa in boqol kun oo qof oo u badan carruur ku nool woqooyiga dalka Nigeria ay halis ugu jiraan in sandka dambe ay u dhintaan gaajo.
Hay'addan oo jeedinayay baaq deg deg ah ayaa waxa ay dalbanaysaa gargaar bani'aadanimo oo kabadan hal bilyan oo doolar si loogu gurmado dhulka ay dhibaatada ka soo gaartay weerarrada kooxda Booko Xaraam.
Qaramada Midoobey ayaa xaaladda ka jirta woqooyiga Nigeria ku tilmaantay xasaaraddii ugu ba'nayd ee maanta soo wajahday qaaradda Afrika.
Inkastoo milatariga dalka Nigeria uu hadda la wareegay dhul ballaaran oo ay horey u maamuli jirtay kooxdan Booko Xaraam, haddana dhibaatada kooxdan ayaa waxa ay wax soo saarkii beeraha iyo sidoo kale gargaarka bani'aadanimo oo aan gaari karin dhulka ay ka taliso.
Cunno la'aan ba'an ayaa sababtay in dadku ay gaajo u dhintaan.
Hay'adda dhakhaatiirta aan xudduudda lahayn ayaa bishii la soo dhaafay waxa ay qiyaastay in kummanaan carruur ah ay durbaba gaajo u dhinteen.
Qaramada Midoobey waxa ay hadda sheegaysaa in ay u baahan tahay gargaar bani'aadanimo oo deg deg ah in ay gaarsiiso ku dhawaad toddobo milyan oo qof.
Colaadda dalka Nigeria ayaa hadda waxa ay yeelanaysaa waji cusub kaddib sanaddo ay rabshado ka socdeen dalkaasi, waxaana hadda ay cabsidu tahay in gaajo ay layn karto dad ka badan kuwa kooxda Booko Xaraam ay laysay.